Fiantohana sy fiantohana amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana - Proton California
Safidy vidiana sy fandrakofana amin'ny fitsaboana kanseran'ny Proton Therapy
Sarotra ny miatrika fitiliana homamiadana. Manana ekipa voatokana amin'ny toerana izahay mba hanampy anao amin'ny asa-taratasy, hiasa miaraka amin'ny mpamatsy fiantohana, manao raharaha momba ny fitsaboana anao ary manampy anao amin'ny fangatahana aza, manamaivana ny vesaran'ny fiatrehana ny vidiny sy ny fiantohana ara-bola mba ahafahanao mifantoka amin'ny lasa tsara.
Ohatrinona ny vidin'ny fitsaboana kanseran'ny Proton amin'ny 2021?
Ny vidin'ny fitsaboana ny proton dia miovaova arakaraka ny mpamatsy anao, ny toe-pahasalamanao, ny tantaram-pitsaboana ary ny anton-javatra hafa toy ny isan'ny fitsaboana. Ataovy ao an-tsaina ny vidiny isaky ny fatra proton isan'andro dia mety ho somary lafo kokoa noho ny taratra nentim-paharazana, saingy ny vidiny maharitra dia mety ho kely noho ny marary mihinana traikefa kely kokoa izay mitaky fitsaboana na fanafody. Raha ny tena izy, vao haingana dia nampiseho fa ny vidin'ny fitsaboana proton dia ambany noho ny safidy fitsaboana fitsaboana homamiadana hafa.
Safidy fandrakofana sy fiantohana ho an'ny fitsaboana Proton
Fonony feno: Na dia misy fitsaboana aza ny fitsaboana ny homamiadan'ny proton beam dia misy ny fiarovana ny fiantohana manokana. Ny orinasa sasany dia tsy mandray vola amin'ny serivisy na manarona fitsaboana fotsiny noho ny aretina sasany. Raha mandoa fitsaboana proton ny mpitantam-piantohana anao, matetika ny marary dia mihena kely na tsia ny fandaniam-bola tsy misy aorian'ny famoahana ny vola sy ny fandoavam-bola fanao isan-taona.
Fampisehoana tranga-tranga: Amin'ity toe-javatra ity, ny ekipa manam-pahaizana momba ny homamiadana sy ny mpitsabo dia hiasa mivantana amin'ny drafi-piantohana anao hitady fahazoan-dàlana hikarakara amin'ny alàlan'ny fanomezana antontan-taratasy mety hanohanana ny filàna fitsaboana.
Ohatrinona ny vidin'ny fitsaboana Proton raha tsy misy fiantohana?
Tsy misy fandrakofana: Ho an'ireo tsy misaron-tava amin'ny fitsaboana proton, na Amerikanina sy teratany vahiny tsy misy fandrakofana any Etazonia dia manolotra safidy mandoa tena izahay.
Fanampiana amin'ny fiantohana
Manana ekipa mavitrika amin'ny solotenan'aretina sy dokotera izahay izay hiasa miaraka amin'ny mpamatsy vola amin'ny alalanao ho fanamorana ny fanomezan-dàlana sy ny famerenam-bola amin'ny fikarakarana. Manampy amin'ny:
Mamaly ireo fanontaniana momba ny fiantohana
Manoratra taratasy ilaina amin'ny fitsaboana ary mandefa taratasy fanohanana ho anao
Mandray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fitsaboana anao
Manome drafi-pitsaboana ampitahaina raha takiana
Mandefa fitarainana momba anao raha mandà ny fandrakofana ny fiantohana anao
Ny fanamafisana ny fahazoanao tombony, ny tombontsoanao, ny sandany azo averina sy ny fepetra takian'ny fiaraha-miasa / ny fiantohana
Mitadiava valiny amin'ireo fanontaniana momba ny fiantohana matetika.
FAQs amin'ny fiantohana